Dry basemgongxweni yeziTyalo, eyomileyo Blender Machine, Powder Ukupakisha Machine - QuanHua
Dry basemgongxweni Plant
Large Ready Mix eziQhelekileyo Dry basemgongxweni Plant
Special Dry Powder basemgongxweni Plant
QH-40 Series Dry Powder basemgongxweni Plant
QH-60 Series Dry Powder basemgongxweni Plant
QH-50 Full-Auto Wall Putty Ukuxuba Machine
Tile Bukanqinishe Manufacturing Plant
Ready Mix intlama Plant
Dry Mix basemgongxweni Plant
UKUGCINWA KWE-AUTO NGOKUGCWELE UKWENZIWA KOMATSHINI
SEMI-AUTO IBHODI UKWENZA KOMATSHINI
Umatshini weBlender owomileyo
Shaft Double nesimbo lokuxhuba
LDH zokulima Umxhubi Machine
Iribhoni Umxhubi Machine
Uthuli Collector kwi phezulu wesisele
oomatshini ukuzaliswa Open Mouth Bag
ibhegi enkulu Filling Machine
machine ivale rotary
Ivelufa Bag Ukupakisha Machine
Umshini Ukupakisha Valve
NE Chain Indlu elevator
TD Belt Indlu elevator
Chain TH Indlu elevator
Inkqubo yeMveliso yeSanti
Isando isityumzi Machine
Umhlathi isityumzi Machine
Isityalo sokutyhoboza esiSelfowuni
Sand Ukwenza System
Oluzenzekelayo ukutshiza balutyabekayo Machine
Nodaka ufutha Machine
Wall ukufaka Machine
Floor eziphathekayo Ukugaya Machine
Imfonomfono eyomileyo Imveliso yokuMnyama
Inkqubo yeRobotic Palletize
India Clients-15 Full-auto ngodaka owomileyo Umxhubi izityalo
Malaysia Clients -25TH Full-Auto Dry udaka udaka lokuxhuba izityalo
Qatar Clients-EYI 10 NGOKUPHELELEYO-Auto owomileyo nodaka: Umxhubi TYALA
Russia Clients-30 Full-auto ngodaka owomileyo Umxhubi izityalo
UAE Clients- 15 iimilo-auto ngodaka owomileyo Umxhubi izityalo
Uzbekistan Clients-20 Full-auto Tower Uhlobo Dry basemgongxweni Umxhubi Plant
MIX Dry udaka TYALA
QH-30 Simple Udidi owomileyo Mix basemgongxweni, yezityalo, oku chatha tyaba (esebenzayo utyale aphantsi), ukusebenza kakuhle, intsebenziswano elula, bagubungele ummandla indawo encinci, ngaphantsi iyunithi yabasebenzi (2-3), izinto eziphakamileyo ukuxuba [.. ] Funda Okunye
Tile ingcina Manufacturing TYALA
Tile yezityalo mveliso ngcina kusetyenziswa ukuvelisa yodongwe tile ngcina, lokufaka, ubushushu ulondolozo multiplexed ukusetyenziswa inkqubo ngcina udaka, wamatye ngodaka [..] Funda Okunye
MIX SILUNGILE udaka TYALA
Ready yezityalo mix udaka isetyenziselwa ukuvelisa umgangatho ophezulu kunye nesamente gypsum yokusingqongileyo kunye gypsum self-ukulinganisa. Le gypsum udaka ke sokulinganisa esisiseko. Aphila ngayo [..] Funda Okunye
Shandong QUANHUA Import & YOKUTHUNYELWA CO., LTD.
Xin Hua Group izinze ibekwe e Jinan, isixeko imithombo, oko inkampani enkulu-scale elidibanayo urhwebo lwemveliso, uphando lwezenzululwazi, intengiso, neentengo kwamanye amazwe. Le nkampani iye yasekwa ngo-2003 Idilesi yethu Imboni Anqiu Shiquan Industrial Park, Weifang City, kwiPhondo Shandong, ibandakanya ummandla we-200,000 square metres kunye indawo nokwakhiwa 120,000 square metres, kunye nabasebenzi 300, ngoku kwanokwakha kwisikhokelo sophuhliso esibanzi, kumashishini amakhulu ikakhulu oomatshini yokwakha, zincediswa kukho ufakelo kunye nolwakhiwo.
THINA yenu nobudlelwano ABABONELELI ISINYIBILIKO
Njengomvelisi phambili somxube owomileyo udaka izityalo umatshini izixhobo zokwakha e china, sizibophelele ekubeni phambili kobugcisa ezintsha gqolo ukuphucula zonke iinkalo zeshishini lethu. Isicwangciso sethu isinceda bafumane ngamandla kwimarike yamazwe ngamazwe yaye iqinisekisa yokukhula kwexesha elide. Xin Hua brand ezithandwa shishino kunye umatshini wethu zithunyelwa Malaysia, Vietnam, eRashiya, Kazakhstan, Uzbekistan, Mongolia, Qatar, Algeria, Egypt kunye namanye amazwe. Iwine inkxaso umthengi kunye trust.
ISO isitifiketi CE
Perfect Emva-Sales Service
Iiyure ezingama-24 online impendulo okanye utsalele umnxeba emva
Abaza kuzisebenzisa kunye ixhegokazi iindawo banxibe unikezelo
-Free ukuqeqeshwa ukuba abasebenzi bakho
Yintoni ibumba kowomileyo?
1. Ngokungafaniyo mortars umsebenzi-site, ngodaka owomileyo nayo ngokuba ngodaka pre-engumxube, evela kwi mveliso kunye nezibonelelo abazinikeleyo kwi kugecwa ukuxuba izithako kwinkqubo kakhulu-elawulwa. Ingasetyenziswa ngqo nje ngokongeza amanzi kwisiza umsebenzi.
2. zinezibonelelo ezikumgangatho engaguqukiyo, uluhlu ilawulwe, ixesha ukonga kunye neendleko zabasebenzi. Ngokudibanisa machiza ezahlukeneyo, iye iimpawu emihle bond, thermal kunye yokugquma yiacoustic, ngothanda-ukuxhathisa, workability, Amanzi-ukugcinwa, anxibe-ubungqina, anti-umhlwa, njl
3. ngodaka owomileyo ukutshatisa iintlobo ezahlukeneyo izinto zokwakha ezintsha ngokuphuculwa uqulungqo. Ezi iipropati elungileyo ukuphucula nje kuphela umgangatho isakhiwo kunye nobomi kakhulu, kodwa ukunciphisa ukusetyenziswa nodaka kwi ngezinga elikhulu.
4. Imfuneko ludaka owomileyo liye landa ngokukhawuleza ngenxa merit yayo ebalaseleyo azinakufaniswa nodaka uphambene kwi umsebenzi-site.
Ukuba ngaba ungathanda ukwakha udaka isityalo owomileyo mveliso yakho, QuanHua Umxhubi Team wethu liya kusebenzisa ubuchule babo enkulu kunye nolwazi lobugcisa ukuyila ezintsha lokuphela phambi kwe- Dry Mix basemgongxweni Industries.
weenjineli zethu kakhulu zinika uyilo owomileyo umxube yezityalo, inkxaso ukuqala-up, imibuzo, uqeqesho, ncomo uluvo lwesibini yokuvuselela iinkonzo ukwandisa umthamo wakho umxube udaka esityalweni. Ukuba ngaba ukulungele ukufunda okungakumbi malunga neenkonzo zethu, ikulungele ukuncedisa kuwe ekuyilweni imfuneko sakho thina.
Thina sizimisele ukunika iindleko izisombululo kunye neemveliso ezisemgangathweni kunye sotshintsho ngokukhawuleza kakhulu. Thina enye bambalwa abayiqondayo iimfuno umgangatho kunye nokunikezelwa nabathengi bethu zasekhaya nezamazwe ngamazwe. izityalo ngodaka Dry ziyilelwe ukugcina engqondweni owomileyo kumxube udaka yezityalo ikontraka elindelekileyo mali.
QuanHua Umxhubi Equipment Machine Factory ligubungela ummandla we-200,000 square metres kunye indawo nokwakhiwa 120,000 square metres, nabasebenzi abaqeqeshiweyo 300. Zonke umatshini izixhobo ngawo ngokutsho ISO9001 kunye CE standard. Emva bokwenziwa, bonke matshini luya kuvavanywa ngqongqo de runs kakuhle.
umatshini wethu akwazi ukupasa SGS uhlolo kunye nabanye, ngoko ngecala lakho bangahlela ukwenza uhlolo phambi ngolwandle.
Kuba Iseti izityalo ngodaka owomileyo, ngaphandle kokuba injini zifuna siemens kwaye kufuna iinyanga-2 ixesha imveliso, zonke ezinye umatshini ukusebenzisa iintsuku 30-45 ixesha imveliso.
Njengenkokheli ehlabathini kushishino, sinika abaxhasi ipasile inkonzo epheleleyo kwaye azamkele iprojekthi turnkey for iinkonzo. Sinikeza ngeenkonzo ufakelo kunye zokwakha epheleleyo yazo zonke izixhobo thina futhi zinikezele. installers yethu intsimi oqeqeshiweyo nonamava kakhulu sizibophelele ukuba ekwaneziseni iimfuno kakhulu bangawenzi abaxumi bethu.
Iinkonzo zethu kwakhona ufakelo-kuquka ukubekwa & ulungelelwaniso, ibuye yakhiwe & uguqulelo kancinane, ukulungisa & neenkonzo kwakhona ufakelo-. Kovela ziquka inkqubo ukuyila, izixhobo setting, izixhobo zokuthutha, inkqubo ukuqala & zokugunyazisa & ulawulo lweprojekthi kunye nezinye izixhobo ezahlukeneyo ngamnye iimfuno ezithile.
Umatshini wokwenza ibhloko
Room 617, Flat F, No. 9999, Jingshi Road, District Lixia, Jinan City, kwiPhondo Shandong, China
Anqiu Shiquan Industrial Park, Weifang City, kwiPhondo Shandong, China
Wall Putty Ukuxuba Machine, Dry Powder Blender Umxhubi, Oluzenzekelayo Dry basemgongxweni Plant, Dry basemgongxweni Ukuxuba Machine Nge Balekisa seMbasa yeSizwe , Dry Powder Umxhubi Machine, Ldh zokulima Umxhubi Machine ,